Qaabkee Cristiano Ronaldo ugu guulaystay laacibka aduunka ugu wanaagsan. – Puntland News
Home 2016 December 13 Sports Qaabkee Cristiano Ronaldo ugu guulaystay laacibka aduunka ugu wanaagsan.
Qaabkee Cristiano Ronaldo ugu guulaystay laacibka aduunka ugu wanaagsan.
December 13, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 2
Cristiano Ronaldo ayaa markii afraad ku guulaystay abaal marinta shaqsiga ah ee xidiga aduunka ugu fiican ee Ballon d’Orka kadib markii uu Lionel Messi iyo xidigihii kale ee la tartamayay ku garaacay codbixintii ay suxufiyiinta ay France Football u soo xulatay ka qayb galka abaal marintan.
2 thoughts on “Qaabkee Cristiano Ronaldo ugu guulaystay laacibka aduunka ugu wanaagsan.”
Yaxye April 24, 2017 at 8:04 am · Edit
Cristiano Ronaldo laacib weeye
abdelqani mubarak May 21, 2017 at 10:36 pm · Edit
ronaldo waa laacib laakin mesi marna ma gadhi karo wayo